दुई मन्त्रीले जुराए एमाले प्रबेश गर्ने साइत, को हुन् उनि ? — Imandarmedia.com
दुई मन्त्रीले जुराए एमाले प्रबेश गर्ने साइत, को हुन् उनि ?
काठमाडौ। संघिय सरकारका दुई मन्त्री नेकपा एमाले प्रबेश गर्ने भएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री प्रेम आले र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’ एमाले प्रबेश गर्ने भएका हुन्।
नेपका एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेका आले र श्रेष्ठ एमालेमै फर्किन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहमत भएका छन्। उहाँहरुको पार्टीमा कस्तो हैसियत हुने भन्ने विषयमा ठोस हुन बाँकी छ’ एमाले श्रोतले भन्यो, ‘अर्को चरणको वार्तापछि त्यो ठोस हुन्छ।
श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस मे १ का दिन उनीहरुले पार्टीमा फर्किने मोटामोटी सहमति भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारबाट फिर्ता बोलाउने तयारी भइरहेको बेलामा उनीहरुले यस्तो कदम चालेका हुन्।
बैशाख १८ गते उहाँहरुले टिका लगाउने मोटामोटी सहमति भएको छ, श्रोतले भन्यो, अध्यक्ष केपी ओली ज्यूले पहिला सरकार र पार्टी परित्याग गरेर आउनुहोस्, एमाले तपाईँहरुलाई सहयोग गर्न तयार छ भन्नु भएको छ।
दुई मन्त्री सहित ८ सांसद एमाले प्रबेश गर्ने भएका हुन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा आलेले ८ जना सांसदसहित भोट हालेका थिए। उनीहरुकै भोटका कारण देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले आफ्नो पार्टीबाट संघीय सरकारमा मन्त्री बनेकाहरू अहिले अर्कै पार्टीको अध्यक्षको दैलो धाउन थालेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका हुन्।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका केही मन्त्रीहरूबारे पराजुलीले सार्वजनिक रुपमै गम्भीर कुरा उठाएपछि समाजवादीभित्रको विवाद पनि सतहमा आएको छ।
तर यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने मन्त्रीमा टिकी राख्न बार्गेनिङ गरेको बताएका छन्। पहिलो लटमा बनाएका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेपछि दुई मन्त्रीले बागर्नेनिङका लागि ओलीलाई भेटेको नेकपा एस निकट श्रोतको दावि छ।
तेस्तै,प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
बुधबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनको ल्होत्से हलमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संसदीय दलका नेता ओलीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले ६५ देखि ७० प्रतिशत जित हासिल गर्ने दाबी समेत गरे। संसदीय दलका नेता ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएको पार्टीका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए।
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा योग्य उम्मेदवार उठाउन पनि सांसदहरुलाई सचेत गराएका थिए।प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने, ‘आज हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष, संसदीय दलका नेताले हामी प्रस्तावित वैशाख ३० गते हुने चुनावका लागि ६५ देखि ७० प्रतिशत सिटमा नेकपा एमालेले विजय प्रााप्त गर्दछ।
उहाँहरू गठबन्धनको तयारीमा हुनुहुन्छ। गठबन्धनका लागि उहाँहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छौं तर नेकपा एमाले स्थानीय तहमा यदाकदा कुनै राजनीतिक दलसँग हुने गठबन्धन एकताबाहेक नेकपा एमाले देशभर एक्लै लड्छ।’
६ हजार ७४३ वटा वडा, ७५३ वटा पालिकाहरूमा नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लडेर ६५ देखि ७० प्रतिशत सिटमा विजय प्राप्त गर्ने, पूर्वानुमान अध्यक्षले आजको बैठकमा राखेको उनले बताए। त्यसका लागि सांसदहरूले आफ्नो सारा हैसियत खाजेर,
आसन ग्रहण खोजेर नेताजस्तो भएर नभई कार्यकर्ताजस्तो भएर जनतासँग नङ(मासुजस्तो सम्बन्ध कायम गरेर योग्यतम उम्मेदवारहरूलाई खडा गरेर, सकेसम्म सर्वसम्मतिका साथ उम्मेदवारी छानेर, हामीले यो चुनावमा विजय प्राप्त गर्नुपर्छ।
र त्यो अभियानमा सरिक हुन निर्देशन गर्नुभयो,’ उनले भने।प्रमुख सचेतक सचेतक भट्टराईले सत्तारूढ दलहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पास नगराउन र अदालतलाई गिजोल्ने मनसायका साथ ल्याएको दाबी समेत गरेका थिए।
तेस्तै, ओलीले सत्ता गठबन्धनले अमेरिकालाई समेत झुक्याएको आरोप लगाएका छन्। आज एमाले संसदीय दलको बैठकमा उनले गठबन्धनमाथि अमेरिकालाई छक्याएको आरोप लगाएका हुन्।
बैठकमा गठबन्धनप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका उनको भनाई उदृत गर्दै एक एमाले सांसदले भने,‘अमेरिकालाई छक्याउनेहरुले जनतालाई पनि छक्याउन सक्छन, जो कोहीलाई छक्याउन सक्छन्।
गठबन्धन भ्रमहरु फैलाउन लागिपरेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरे। एमालेले एक्लैले चुनाव जित्नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्दै त्यही अनुसार अगाडि बढ्न निर्देशन दिए।
स्थानीय चुनावमा पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन सक्रियतापूर्वक लाग्न भने। तीन तहको चुनाव नै एमालेले जित्ने दाबी गर्दै ओलीले सबै किसिमका छलछाम र षड्यन्त्र चिरेर बढ्न निर्देशन दिएको बुझिएको छ।